အရှုံးသမားတစ်ယောက်ရဲ့အမူအကျင့် ၈.ချက် – Blue Sea
blueseaskt | August 18, 2019 | Knowledge | No Comments
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်က သုတေသန တစ်ခုပြုခဲ့ပါတယ်။
၁။ ချီတုံချတုံ ဖြစ်ခြင်း ( ၁၃ % )
ဘာကိုမှ ပြတ်ပြတ်သားသား မဆုံးဖြတ်ရဲ၊ ဟိုယောင်ယောင်၊ ဒီယောင်ယောင်၊ ဟိုဟာလုပ်ရင် ကောင်းနိူးနိူး၊ ဒီဟာလုပ်ရင် ကောင်းနိူးနိူးနဲ့ အချိန်ကုန် အသက်ကြီးသွားတဲ့ လူများတစ်ပုံကြီးပါ။ မှားမှာကြောက်လို့၊ ဆုံးရူံးမှာ ကြောက်လို့ ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဟာ ချီတုံချတုံကို ဖြစ်ပေါ် စေပါတယ်။ ဘယ်အရာမဆို ၁၀၀% သေချာမှ လုပ်မယ်ဆိုရင် အခွင့်အရေး အဲဒီနေရာမှာ မရှိတော့ပါဘူး။
၂။ အချိန်ဆွဲခြင်း ( ၉%)
လုပ်မယ်၊ လုပ်မယ်၊ မနက်ဖန်စမယ် ဆိုပြီး မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ မနက်ဖန်ဖြစ်နေရင် အလုပ်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ခဏမှလုပ်မယ်။ နက်ဖန်မှ လုပ်မယ်။ နောက်တစ်ပတ်မှ စလိုက်မယ် ဆိုတဲ့ အကျင့်မျိုးဟာ လူတစ်ယောက် ကျရူံးစေတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရာထဲမှာ ပါပါတယ်။
၃။ ကောက်ရိုးမီး အကျင့် ( ၈%)
ဘာပဲလုပ်လုပ် အစပဲကောင်းပြီး အဆုံးမရှိတာမျိုး၊ စာတစ်အုပ်ဖတ်တော့မယ်လို့ သေသေချာချာ ဆုံးဖြတ်ပြီး ပထမပိုင်း ၁၀ မျက်နာတောင် ပြီးအောင် မဖတ်ရူ့ နိုင်တဲ့ အကျင့်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ်ဝနေပြီ၊ ၀ိတ်ချတော့မယ်။ အစတုန်းကတော့ ဟုတ်မလိုလိုပဲ၊ နောင်တော့ အဖျားရှူးသွားတယ်။ ချလေ၀လေ ဖြစ်သွားတယ်။ လုပ်ငန်းတစ်ခု စလုပ်တယ်။ အစတော့ အားတက်တရော၊ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကြိုးစားပါတယ်။ အလုပ်တောင်ကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးဘူး၊ အဖျားရှူးသွားတာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။
၄။ သူများငြင်းဆိုမူကို ကြောက်ရွှံ့ ခြင်း ( ၇%)
ကိုယ်ချစ်မိတဲ့သူ ငြင်းဆိုမှာ ကြောက်လို့ ရည်းစားစကားမပြောရဲတဲ့လူဟာ ကုိုယ်ချစ်တဲ့လူ အခြားလူနဲ့ ညားသွားတဲ့ အခါကျမှ အကြီးအကျယ် အသဲကွဲရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်၊ အခွင့်အရေးတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ကိုယ်စတောင် မစရသေးဘူး၊ သူများငြင်းဆိုမယ်ဆိုတာကို စိုးရိမ်နေရင် ဘယ်တော့မှ မစဖြစ်တော့ပါဘူး။
၅။ မိမိကိုယ်မိမိ ဘောင်ခတ်ခြင်း ( ၆% )
ဆိုပါစို့၊ ဒီအလုပ်ဟာ အလုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ လုပ်ကိုိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး လည်းရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်မိသားစုရဲ့ ဂုဏ်ကို ငှဲ့လို့ မလုပ်ဖြစ်တဲ့လူတွေ အများကြီးတွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒါ ဂုဏ်ငယ်မှာကြောက်လို့ ကိုယ့်ဘောင်ကို ကိုယ်ပြန်ခတ်မိတာဖြစ်တယ်။ ဟုိုအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဘာကြောင့်၊ ဒီအလုပ်မလုပ်ချင်ဘူး၊ ဘာကြောင့်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘောင်ခတ်တာ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။
၆။ အဖြစ်မှန်ကို ရင်မဆိုင်လိုခြင်း ( ၇%)
လက်တွေ့မကျတဲ့လူကို ဆိုလိုတာပါ။ စိတ်ကူးယာဉ်ဆန်လွန်းပြီး ကိုယ့်စိတ်ကူးယာဉ်ထဲမှာပဲ ကျေနပ်နေတတ်တဲ့ လူစားမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ ဘာမဆို အလကားလိုချင်တယ်။ အလုပ်ကောင်းအောင်ထက် ကံကောင်းအောင်ပဲ အားထုတ်နေတတ်တယ်။ အချိန်ရှိတိုင်း ထီပဲပေါက်နေချင်တယ်။ နေ့ချင်းညချင်း ချမ်းသာချင်တယ်။
ရ။ ဆင်ခြေများလွန်းခြင်း ( ၂၂ % )
ဆင်ခြေများလွန်းခြင်း၊ အကြောင်းပြချက်များလွန်းခြင်း ဟာ ဘ၀ဆုံးရူံးစေတဲ့ အကြောင်းရင်းထဲမှာ ၂၂% တောင်ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အလုပ်ကို စိတ်နှစ်ကိုယ်နှစ် မလုပ်ကိုင်တတ်ပါ။ ဘာပဲအားနည်းချက်တွေ့တွေ့ သူတို့မှာ အကြောင်းပြချက် အပြည့်အစုံ အမြဲရှိနေတတ်တယ်။ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်ကြောင့်၊ အလုပ်ရှင်ကြောင့်၊ ခေတ်စနစ်ကြေင့်၊ မိဘများကြောင့်၊ သူငယ်ချင်းကြောင့်၊ အစိုးရ ကြောင့်၊ သူတို့ဆုံးရူံးရတယ်လို့ပဲ သူတို့ ယူဆကြပါတယ်။ သူတို့ကိုသူတို့ ဘယ်သောအခါမှ မစမ်းစစ်ပါ။
၈။ သင်ယူရန် ငြင်းဆန်ခြင်း ( ၁၁ % )
သင်ယူတယ်ဆိုတာ ပင်ပမ်းရပါတယ်။ အားထုတ်ရပါတယ်။ ဦးနောက်သုံးရပါတယ်။
သူတို့ဟာ ဘာပဲလုပ်လုပ်၊ ဘယ်မှာပဲလုပ်လုပ်၊ အလုပ်ကို ပြီးအောင်သာလုပ်ပါတယ်။ ၀တ်ကျေတန်းကျေ လုပ်ပါတယ်။ အပြစ်တင်လွတ်အောင်သာ လုပ်ပါတယ်။ ဘယ်အလုပ်မဆို သင်ယူနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ရှိတယ်ဆိုတာ သူတို့ မသိကြပါ။ သိရင်လည်း မလုပ်လိုကြပါ။ အလုပ်အားရင် သက်တောင့်သက်သာနဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းဆော့နေကြပါတယ်။ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ကြပါတယ်။ စကားပြောနေကြပါတယ်။
ဟားဗတျတက်ကသိုလျက သုတသေန တဈခုပွုခဲ့ပါတယျ။
ဆငျခွမြေားလှနျးခွငျး၊ အကွောငျးပွခကျြမြားလှနျးခွငျး ဟာ ဘဝဆုံးရူံးစတေဲ့ အကွောငျးရငျးထဲမှာ ၂၂% တောငျပါဝငျပါတယျ။ သူတို့ဟာ အလုပျကို စိတျနှဈကိုယျနှဈ မလုပျကိုငျတတျပါ။ ဘာပဲအားနညျးခကျြတှတှေ့ေ့ သူတို့မှာ အကွောငျးပွခကျြ အပွညျ့အစုံ အမွဲရှိနတေတျတယျ။ လုပျဖျေါကိုငျဘကျကွောငျ့၊ အလုပျရှငျကွောငျ့၊ ခတျေစနဈကွငျေ့၊ မိဘမြားကွောငျ့၊ သူငယျခငျြးကွောငျ့၊ အစိုးရ ကွောငျ့၊ သူတို့ဆုံးရူံးရတယျလို့ပဲ သူတို့ ယူဆကွပါတယျ။ သူတို့ကိုသူတို့ ဘယျသောအခါမှ မစမျးစဈပါ။
သူတို့ဟာ ဘာပဲလုပျလုပျ၊ ဘယျမှာပဲလုပျလုပျ၊ အလုပျကို ပွီးအောငျသာလုပျပါတယျ။ ဝတျကတြေနျးကြေ လုပျပါတယျ။ အပွဈတငျလှတျအောငျသာ လုပျပါတယျ။ ဘယျအလုပျမဆို သငျယူနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေး ရှိတယျဆိုတာ သူတို့ မသိကွပါ။ သိရငျလညျး မလုပျလိုကွပါ။ အလုပျအားရငျ သကျတောငျ့သကျသာနဲ့ လကျကိုငျဖုနျးဆော့နကွေပါတယျ။ လ်ဘကျရညျဆိုငျထိုငျကွပါတယျ။ စကားပွောနကွေပါတယျ။
Harvard University didaresearch.
A person ရူံး
1. Being hesitant (13%)
None unequivocally determined, I just This just in That basically enthusiasts enthusiasts, This time, though, it has enthusiasts enthusiasts aged, when lots of people. False Fears ရူံး Fears give hesitant to occur. 100% what you do, there is no opportunity.
2. Procrastination (9%)
abolish, abolish, Tomorrow, I can not finish tomorrow still do not work anymore. A little spending money. Tomorrow it will. I’ll get on to the next person ရူံး works in the main content.
3. Straw fire behavior (8%)
The matter being no end of good, A copy of the letter would read or read carefully, determined to finish the first 10 face the kind of works that can cheer. Very well, It’s going to lose weight. Like when ‘Yes, Later fizzle. Welsh children. Work began a. Stock up Earnestly tries. Are ready foragood job, Means any fizzle.
4. He declined to fear (7%)
I loved denied Fears ofaholiday from When loved other people and respect people, sometimes very heavily. Occupation, The same opportunity. I can not yet, Never fear would deny pinch.
5. Self Rules. (6%)
Suppose, This work may not work. There is also the opportunity to work. But my family’s honor ငှဲ့ Well, I do not seealot of people. It is so small, I was afraid my body frame. I could work, Why, The want to be the work, Why is it out yourself, there arealot of frames.
6. If you want the truth, (7%)
False means. Too Fiction Fiction satisfaction within themselves generously meansakind of person. I want you know that whatever. Sometimes they work better than trying ကံကောငျးအောငျ. Every time lottery just want to be alone. I want to rest overnight.
get. Argument is very high (22%)
Too many excuses, Too many reasons to make life ရူံး contains about 22% in the South. They work two years is not working. Sometimes they find whatever weakness they always full reasons. Coworkers, due to take The employer, Enough said Parents, Friends, Government, ရူံး factor considered. They never try them.
8. They refused to learn (11%)
Even if the content of learning. Efforts. After the first run.
They matter, Where does it Completing work on the cervix. Hospitable host cervix. Dimon blamed the cervix. What job do not know that there isachance to learn. If you know they want to do. Less desire to work with mobile phones are playing. Sitting inatea shop. The words say.
#Credit ……. ဖတျစရာမှတျစရာ